Ichoro Apixaban - aasraw
/Nsonaazụ maka "Apixaban"
post 06 / 14 / 2018 Dr. Patrick Young
Ihe niile gbasara Apixaban (Eliquis) 1.Gịnị dị na Apixaban 2.Gịnị bụ Eliquis 3. kedu ihe Apixaban ji mee maka 4.Gịnị ka m ga - ama tupu iji Apixaban 5. Otu esi eji Apixaban / Apixaban na-eji 6.I nwere nchebe iji were ma m di ime ma obu bu nwa? 7. Ogologo oge ole ka m ga - ewere Apixaban [...]
ngwaahịa 03 / 27 / 2018 Dr. Patrick Young
ProhormonePlant ExtractFemale HormonesNootropics powderFat Loss powderR & D ReagentsSARMSOthersSex Na-eme ka HormonesProhormone 4-DHEA (571-44-8) ≥98% Adrenosterone ≥98% Amp Citrate (71776-70-0) ≥98% D-Dọọ Dọọ Dọọ Dọọ? (DMZ) ≥3% Levothyroxine (T98) ≥98% OL 98 (4-98-135) ≥681135% Stanolone ≥77% Trestolone Acetate (MENT) ≥3% Osisi wepụ Nuciferine ≥98% Bromelain ≥98% PolypodiuM Extract ≥ 98% Ndi Hormones nwanyi 98-Hydroxyprogesterone caproate ≥98% Allylestrenol (98-17-98) [...]
post 08 / 31 / 2018 Dr. Patrick Young
1.Armodafinil 2.Modafinil 3.Noopept 4.J147 5. 6.Shootetam 7 Phenylpiracetam. Bromantane Nootropics bụ aha ọhụrụ Smart-Drugs si Silicon Valley. Ha na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ nke ọma ma na-agbasa ngwa ngwa site na US West Coast. Ndị ọkachamara na-adọ aka ná ntị megide ihe ize ndụ nke [...]
post 06 / 30 / 2018 Dr. Patrick Young
Ihe niile banyere 4-DHEA 1.Gịnị Bụ 4-DHEA 2.How N'ihe 4-DHEA Ọrụ 3.I 4-DHEA bụ Prohormone 4.Gịnị Ka 4-DHEA baara uru? 5. 4-DHEA bụ Anabolic Steroids 6. Olee otú Iji 4-DHEA? 7. Otu esi achoputa 4-DHEA mmetụta nke 8.How otutu 4-DHEA a gbanwere na testosterone 9.What Is [...]